Fadeexad dhanka Tareenka İZBAN | RayHaber | raillynews
[06 / 02 / 2020] Goorma ayaa la furi doonaa Sabiha Gökçen Runway Airport?	34 Istanbul
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirFadeexad ku saabsan tareenka IZBAN
10 / 06 / 2016 35 Izmir, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, TURKEY
Jahawareer ku socda IZBAN Train: Iirbaan, oo ah labo qof oo u dhaxeeya labada jasiiradood ee IZBAN, gaadiidka dadweynaha, ayaa waxaa kormeeray kamaradaha ammaanka.
Iiraan, fadeexad ayaa ka muuqatay tareenka Nidaamka Dhismaha ee IZBAN (IZBAN), halkaasoo kumanaan qof ay maalin walba safaraan. Waxaa lagu soo rogay kamaradaha ammaanka ee tareenka iyo mid ka mid ah sawirada laba qof, oo ay ku jiraan haween iyo nin ayaa la yaabay. Lamaane u socdaalay tareenka, kaas oo lagu taliyey in uu habeenkii guuro, wuxuu soo galay xidhiidhka ka dhexeeya joojinta isagoo ogaa in qofna uusan joogin tareenka. Waxaa la sheegey in sawirada muuqaalka kamaradaha lagu sawiray daqiiqado ayaa lagu qoray tareenka IZBAN.
Ma cadda haddii dhacdada dhacday.
Dhinaca kale, saraakiisha IZBAN waxay sameeyeen sahan balaadhan oo ku saabsan sawirada qallafsan. Goorta iyo tareenkee ah sawirrada loo diro adeegga farsamada weli lama hubo. IZBAN logo on albaabka ka baxa ee tareenka ma ka soo baxeen taxadar. Sida laga soo xigtay xogta laga helay mawduuca, waxaa la diiwaangeliyay in aan muuqaalkan oo kale dhawaanahan.
Qarax xoogan oo ka dhacay Tiyaatarka Isboortiga (Video)
Buundada saddexaad 26 diyaar u ah bisha Agoosto
Waxba ma fiicna dhacdada! Laakiinse Ilaah aawadiis, sidee buu u egyahay? Maxaad noo sheegtaa, maxaad noogu sheegaysaa, maxaad u sheegtaa? Muhiimad badan; Maxay tani u leedahay inay la samayso Tiknoolajiyada Tareenka iyo hawlaheeda ??????????
Miyaynu u baahannahay gaajada, xiisaha akhristayaasha?
Ka hor inta aanad soo sheegin waxyaalahan aan micnaha lahayn, waxaa habboon in la istaago oo la fekero saddex daqiiqadood. Sababtoo ah warar noocan oo kale ah mid naga caawiya annaga midna, cidna ma aha!
1528 ayuu yiri:
Waxaan aragnay sida ay tani u keentay inay tahay khamri